Haddii aadan i jeclayn, maxaad sidaas iigu fiirinaysaa? | Ragga Caqliga leh
Haddii aadan i jeclayn, maxaad sidaas iigu fiirinaysaa?
Alicia tomero | 29/08/2021 16:48 | Lamaanaha iyo Galmada
Luqadda muuqaalka ahi waa tan ugu muhiimsan ee la adeegsaday sida hubka wax lagu sasabo. In badan oo xabbado xiriir ah oo dhexmara wada sheekaysiga saaxiibbada dhexdooda ah ama indho badan oo is -jiidanaya, iyadoon maskaxda lagu hayn, waxay naga tagaan go’aan la’aan in haddii aad rabto inaad ka gudubto wax ka badan muuqaal fudud.
Maxay u sameeyaan? Dhab ahaantii, hubaal la’aanta ayaa ka jirta dhammaan xaaladahaas. Haweeneydu si joogto ah ayay kuu eegtaa haddana waxaad u garataa in qoto dheer aysan sidaas kuu jeclayn. Mala -awaalkaaga si fiican ma loo sheegay? Mise waxaa jira wax kale oo ka dambeeya oo aad jeclaan lahayd inaad qiyaasto?
1 Marka haweeneydu aad kuu eegto
2 Waan ogahay inuusan i jeclayn oo aad buu ii fiiriyaa
Marka haweeneydu aad kuu eegto
Waxaa jira dhowr jeer oo aad la kulanto haweeneydaas iyo mar walba wuu ku eegayaa. Waxa yar ee aad awoodday inaad hadasho uma muuqato inay aad kuu danaynayso, laakiin way ku sii eegaysaa.
Si loo caddeeyo qaar badan oo ka mid ah mala -awaaladan, waxaan wax yar ka eegi doonnaa sida haweeneydaasi u dhaqanto. Ninku haddii uu xiiseeyo haweeney wuxuu jecel yahay inuu timaha taabto, taabto shaatiga shaatiga ama hagaajiyo jaakada ama xariga si joogto ah. Naagtu sidaas oo kale ayay samaysaa dharkiisa ayuu hagaajiyaa, is taabtaa oo timaha si joogto ah u garaacaa.
Tilmaan kale ayaa ah markaan taas ilaalinno jidhkiisa iyo madaxiisuba xaggeenna bay u leexdeen. Waqtigan waxaad u malaynaysaa inuu ku eegayo, laakiin maxaa dhici kara haddii madaxiisa iyo jidhkiisu aan xaggaaga loo jeedin? Hagaag, u fiirso waqti ka waqti, maxaa yeelay hubaal waa sidaas ku eegaya dhinac Taasina waa tilmaan wanaagsan oo soo jiidasho leh.
Haddii aad wada sheekaysanayso, u fiirso sida uu indhahaaga u eegayo, haddii uu si dhugasho leh kuu eegayo iyo ma kala fogeeyo sabab kasta ha ahaatee waa in shaki la’aan uu ku jecel yahay. Haddii, dhinaca kale, aad is -hortaagto, waad fiirsataa iyada oo ay kaa fiiriso: markan waxaa laga yaabaa inaysan jirin dan weyn, ama qofkaasi aad buu u xishood badan yahay wuxuuna dareemaa raaxo la'aan inuu qof indhaha ku fiiriyo (waa qof aan isku kalsoonayn).
Waxaa jira haween kuwaas oo kaliya waxay ku hadlaan indhahooda, ku bilow tilmaantan marka ay ku danaynayaan. Laakiin dhab ahaantii ma noqon kartaa tilmaam soo jiidasho leh? Marar badan ayaa lagu wareersan yahay, tan iyo micnaheedu wuxuu noqon karaa qushuuc weyn. Sidoo kale, fiiri haddii fiirintu joogto tahay ama waqti ka waqti. Haddii uu mar uun ku eego markaa dareenkiisa ma qabatid, markaan mar walba ku fiiriyo waxaa laga yaabaa inay micnaheedu tahay wax -xiisayn.
Waan ogahay inuusan i jeclayn oo aad buu ii fiiriyaa
Waad ogtahay inuusan ku jeclayn iyo in badan oo la kulmay indha -indhayntu waa la hayaa. Waxaad ka shakisan tahay inay noqon karto wax kale oo si aad u ilaaliso tilmaamahaaga, fiiri haddii aad indhahaaga ku jawaabto oo aad joogto. Haddii uu fiiriyo oo dhoola caddeeyo, waxay yihiin tilmaamo muujinaya inuu ku jecel yahay. Haddii aad indhahaaga ilaaliso waxaa laga yaabaa inay tahay daqiiqad aan go'aan lahayn, laga yaabee waa mid ku adag oo ku tijaabinaya, si aad u aragto sida aad uga jawaabto.
Ama haddii aad sii eegto iyo ku dhoola cadeynaya markaas micnaheedu waa naxariis, wuxuu doonayaa inuu kula kulmo wuuna kaa war hayaa. Haddii uu dareemo aragtidaada, wuu ku eegayaa, laakiin si lama filaan ah ayuu madaxiisa u rogayaa isagoo dhoola cadeynaya, tani waa calaamad muujinaysa inay jirto wax kale.
Dhinaca kale, ogeysiis haddii gabadhaasi ay mar hore qof ku hawlan tahay. Mar kasta oo aad la kulanto, jaleecyada ayaa bilaabma, hubaal wuxuu dareemayaa qushuuc adiga iyo wiilkiisuna uusan ka buuxin dhinacyo badan.
Waa wax ku dhasha dad badan inay sidan u dhaqmaan, marka lamaanahaagu kula murmo oo xiriirku dhif yahay, had iyo jeer waxaan dooneynaa inaan ku faraxno qof dibadda ah. Markaa waxaan sugaynaa kulankaas waxayna ku bilaabmaysaa jalleecyada yar yar, iyada oo diiradda la saarayo isaga maxaa yeelay wuu ku danaynayaa, laakiin aakhirka waxba uma malaynayaan.
Naagtaas awooddeeda buuxda u adeegsan karto inay ku sasabto, inkastoo marar badan xaqiiqadu aysan ahayn sida ay u muuqato. Si fiican u fiiri sidaan sheegnay, dhammaan faahfaahinta, haddii ay dhab ka tahay oo ay u muuqato mid ka duwan ma jiraan wax gaar ah oo laga naxo. Haddii ay dhoolla caddeyso, way faraxsan tahay waxayna isku daydaa inay sii dheeraato halka ay joogto, markaa wax kale ayaa jira.
Gunaanadku waa cad yihiin, gabadh aan waxba dareemayn oo aad kuu eegaysa ma laha sal cad. Hadduu wax badan ku fiiriyo waayo waxaa jira nooc ka mid ah qaddarinta iyo xiisaha adiga kugu saabsan. Waxaa laga yaabaa inaysan doonayn inay tanaasusho duruufo kale awgood, laga yaabee inay leedahay saaxiib, ama laga yaabee inay aad ugu kalsoon tahay inay hore u socoto.
Dadku waxay leeyihiin dareen yar haddii ay wax kale jiraan, laakiin marmarka qaarkood waxay nagu ciyaaraan khiyaanooyin.Haddii xaalku aad u xiiso badan yahay, fadhiiso, fiiri, ku celi oo jaleeco oo isticmaal dareen. Naxariistaas dhexdeeda waa dhoolla -caddayntaada iyo hadday wax jiraan salaan. Sidan ayaad u degi doontaa oo aad u deganaan doontaa oo kaliya waa inaad sug mar labaad. Tilmaamaha aan bixinnay haddii haweeneydu ku jeclaato, waa inay sii waddo muujinta xiisaha oo mar uun bay awoodi doontaa inay la kulanto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Haddii aadan i jeclayn, maxaad sidaas iigu fiirinaysaa?
Ragga, gadhka leh ama aan gadhka lahayn?